Maxaad Kataqaan Cidii ka dambeysay weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Hotel Centeral? + Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Maxaad Kataqaan Cidii ka dambeysay weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Hotel Centeral? + Sawiro
Warar kala duwan ayaa waxa uu kasoo baxayaa ruuxa fuliyay weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay Hotel Centeral ee Magaalada Muqdisho.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan in weerarkaasi uu fuliyay ruux horay u degnaa Hoteelka oo la sheegay inuu ka imaaday dalka dibadiisa, islamarkaana xili hore uu halkaasi kusii diyaariyay gaari nooca raaxada ah oo uu watay baryahaani dambe.
Dadka ku sugnaa Hoteelka ayaa sheegaya in Ruuxa ismiidaaminta fuliyay looga shakisan yahay ruux ku dhawaad Hal bil degnaa Hoteelka waxaana jiro baaritaano lagu xaqiijinaayo wararka la xiriira ruuxaasi.
Dhimashada ka dhalatay weerarka ayaa la xaqiijinayaa inay kor usii dhaafayaan ilaa 18-ruux oo u badnaa Mas’uuliyiin iyo dad shacab ahaa oo ku shaahinaayay Hoteelka.
Inta badan dhaawacyada Mas’uuliyiinta ayaa loo daadgureeyay Isbitaalka Turkiga ee Digfer ee Magaalada Muqdisho, waxaana la adkeeyay gabi ahaan Amaanka Isbitaalkaasi.
Mas’uuliyiinta Digfer la geeyay ayaa waxaa kamid ah Dhaawaca Ra’isul wasaare ku-xigeenka dalka iyo Xildhibaano kor usii dhaafay ilaa Seddex Xildhibaan, walow warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in laba kamid ah ay yihiin kuwa dhaawacooda uu liito.
Dhanka kale, qaar kamid ah Mas’uuliyiinta dowlada ayaa goordhow booqday goobta uu Qaraxa ka dhacay waxa ayna sheegen in shaqadooda uusan wax ka bedeli doonin Qarax la fuliyo.